Ampidino CCleaner Browser ho an'ny Windows
Ampidino CCleaner Browser
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (4.40 MB)
Ampidino CCleaner Browser,
CCleaner Browser dia mpizaha tranonkala izay misy fiarovana sy tsiambaratelo hitazona anao hilamina aminny Internet. Izy io dia miaraka aminny fitaovana rehetra ilainao hitantanana ny fiainanao manokana momba ny fiainana manokana, ny momba anao ary ny angon-drakitrao manokana. Azonao atao ny misintona sy manandrana CCleaner Browser, tranokala haingana sy tsy miankina ary azo antoka ho anny Windows, avy aminireo mpamorona CCleaner maimaim-poana.
Sintomy ny CCleaner Browser
Ny mpizaha tranonkala anny developer CCleaner, iray aminireo fitaovana fanadiovana PC tsara indrindra tianny mpampiasa hanafainganana ny solosaina sy hahatonga azy io ho azo antoka kokoa, dia mitondra ny anarana CCleaner Browser. Zava-nisongadina taminny CCleaner Browser, izay misy fiarovana sy tsiambaratelo miaro anao izay hiaro anao aminny Internet:
Ad Blocking - Manakana ny doka tsy hampidirina aminny tranokala vangianao ny Adblock, izay manatsara ny hafainganam-pandeha sy ny fiarovana. Ny fanakanana doka dia alefa aminny toerana misy anao.
Anti-Fingerprinting - Ny tranokala sy ny tambajotra doka dia afaka mampiasa ny fikirakirana fanamorianao manokana hanarahana anao. Ny dian-tananny mpanamory anao dia misy data momba ny fikirakiranao sy ny fitaovanao ary ny tantaranny Internet izay voatahiry tsy tapaka rehefa mifanakalo aminny tranokala ianao. Manampy aminny fanafenana ny dian-tànanao dizitaly ny fisorohana ny rantsantanana mba hisorohana ny tranonkala tsy hahafantatra sy hanara-dia anao raha tsy misy ny fanekenao. Ny endri-javatra manohitra ny rantsan-tànana dia afaka manafina ny vaovao ilaina mba hiasa araka ny tokony ho izy ny tranonkala sasany. Raha sendra olana aminny tranokala mitsidika anao matetika ianao dia azonao atao ny manafoana ilay endri-javatra vetivety.
Anti-Phishing - Manakana ny tranokala manimba sy ny fanandramana phishing ny Anti-Phishing rehefa mizaha tranonkala. Izy io koa dia manakana anao tsy hisintona votoaty mampidi-doza aminny Internet izay mety hamindra aminny solosanao. Ny anti-phishing dia alefa aminny toerana misy anao.
Fanakanana ny fanakanana - Miaro ny fiainanao manokana ny fanoherana ny fanarahan-dia aminny alàlanny fisorohana ny tranokala, ny orinasan-tserasera, ny tambajotran-doka ary serivisy web hafa tsy hanara-maso ny hetsika an-tserasera. Mampiasa sivana ihany koa izy io izay manala tanteraka ny lesoka aminny tranonkala, ny script aminny fanarahana, ary ny mpanangona vaovao hafa avy aminireo tranonkala notsidihinao. Ny fisorohana ny fisorohana dia alaina aminny alàlanny default.
CCleaner - CCleaner dia manadio rakitra tsy misy dikany ary mizaha ny angon-drakitra mba hiarovana ny fiainanao manokana, hanafainganana ny solosainanao ary hitazomana azy hihazakazaka tsara kokoa. (Miseho ao aminny Ivotoeram-piarovana sy tsiambaratelo raha napetraka CCleaner.)
Fiarovana (fanitarana) fiarovana - Ny mpiambina fanitarana dia manakana ny fanitarana / plugins tsy atokisana tsy hapetraka ao aminny CCleaner Browser. Io fampiasa io dia alefa tsy misy fanao.
Flash Blocker - Ny atiny miorina aminny Flash dia mampiharihary ny fahasarotanny fiarovana anao, mandany toerana aminny solosainao ary mandany ny androm-piainanny baterinao. Flash Blocker dia manakana ny atiny mifototra aminny Flash tsy handeha aminny PC-nao raha tsy hoe avelanao.
HTTPS Encryption - HTTPS dia kinova azo antoka kokoa aminny fifandraisana HTTP mahazatra. HTTPS dia manampy encryption izay manakana ny hafa tsy hanonofy ary manampy aminny fiantohana fa mifandray aminny mpizara lasibatra ianao. Ny fiasa HTTPS Encryption ao aminny CCleaner Browser dia mamela ny tranokala rehetra tsidihinao hampiasa fifandraisana HTTPS raha manohana azy io. Ny Encryption HTTPS dia alefa aminny alàlanny default.
Mpitantana tenimiafina - Ny fisehonny Password Manager ao aminny CCleaner Browser dia ahafahanao mitahiry ny teny miafinao aminny toerana iray. Midika izany fa mila mahatadidy tenimiafina tokana fotsiny ianao.
Fanadio ny fiainana manokana - Manadio ny tantaranao fitetezana, sary cache, cookies ary maro hafa ny Privacy Cleaner, ary manafaka toerana aminny solosainao mba hiarovana ny fiainanao manokana.
Incognito Mode - Stealth Mode dia fiasa manokana izay manakana ny tantaranao fitetezana tsy hotehirizina ary mamafa ny cookies rehetra na cache aminny Internet azonao nandritra ny fotoam-pizahanao Mode Privacy.
Video Downloader - Video Downloader dia mamela anao misintona horonan-tsary sy horonam-peo mora aminny tranokala tianao. Raha hampiasa anity endri-javatra ity dia tsindrio ny kisary Download Video eo aminny zoro ambony ankavananny efijery, avy eo safidio ny horonan-tsary sy ny endrika tianao alaina.
Fiarovana aminny Webcam - Ny Webcam Guard dia manome anao fifehezana bebe kokoa aminny tranonkala afaka miditra aminny webcam-nao. Isaky ny manandrana miditra aminny webcam-nao ny tranonkala iray vangianao dia misy fampandrenesana miseho mangataka anao hamela na hanohy hanakana ny tranokala.
Haben'ny rakitra: 4.40 MB